Alaab-qeybiyaha Apple Foxconn oo bilaabay sameynta gawaarida | Waxaan ka socdaa mac
Alaab-qeybiyeha Apple Foxconn wuxuu bilaabay inuu sameeyo gawaarida
Waxaan qabaa aragti ah in suuqa baabuurta waxay goor dhow ku dhamaan doontaa kacdoon la mid ah kii ka dhacay dunida laydhka. Illaa dhawr sano ka hor, iftiinka macmalka ah ee ifiyay adduunka wuxuu ku salaysnaa guluubyo iyo iftiin dhalaalaya. Dhowr soo saareyaal ayaa xukuma wax soo saarkooda.
Dhibaatada ka jirta LED beddelaadda nalalka caadiga ah ee nalalka ayaa wax walba beddelay. Warshaddii Lightbulb waa la xiray, oo hadda soosaarayaasha elektaroniga Aasiya ayaa xukuma suuqa nalalka, wax aan la malayn karin ilaa dhawr sano ka hor. Gawaarida korantada leh, wax la mid ah ayaa dhici doona. Baabuur aan lahayn matoor wax gubaya, hiitiirad aan lahayn, xajin lahayn, aalad beddel lahayn, oo keliya mishiin koronto iyo batteri leh, ayaa moobiil uga eg baabuurka car. waan ka baqayaa ...
Foxconn, Iskuduwaha caanka ah ee Aasiya ee aalado badan oo Apple ah, ayaa isku diyaarinaya gawaarida korontada u leh Henrik Fisker iyo xawaarihiisa cusub ee korantada. In 2018, waxay horey u soo bandhigtay gawaarida cusub ee korontada ku shaqeeya ee EMotion oo leh masaafo dhan 400 mayl isla hal lacag.
Sannadkii hore, naqshadeeyaha baabuurta caanka ah wuxuu soo bandhigay nooc kale, the Badweynta Fisker, SUV koronto oo ay sheeganeyso inay noqon doonto gawaarihi ugu horeysay ee wax soo saar kadib markii ay muujiso noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Fisker wuxuu markii dambe ku dhawaaqay heshiis uu la galay Magna si loo dhiso Ocean elekta SUV. Hadda Fisker wuxuu ku dhawaaqayaa heshiis cusub oo lala galayo Foxconn si loo dhiso gaari cusub oo koronto ku shaqeeya. Mashruuca cusub wuxuu leeyahay magaca sumadda «Mashruuca peAR»(Kacaanka Gawaarida Gawaarida Gaarka ah).
Sida ay sharaxeen kuwa iska leh Fisker, shirkadiisa iyo Foxconn waxay si wada jir ah u horumarin doonaan gaari qayb cusub oo kacaan ah. Shirkadda Foxconn ayaa gaariga ku dhisi doonta qiime dhan 250.000 oo gaari sanadkiiba. Waxay yeelan doontaa suuq caalami ah, oo ay ku jiraan Waqooyiga Ameerika, Yurub, Shiinaha iyo Hindiya.
Soo-saarka ayaa loo qorsheeyay inuu bilaabmo rubuca afaraad ee 2023. Kani wuxuu noqonayaa gaari labaad oo ay soo bandhigto nooca loo yaqaan 'Fisker brand', ka dib markii la bilaabay Ocean SUV rubuca afaraad ee 2022.
Foxconn waxay tijaabinaysay soosaarida gawaarida korontada iyadoo ka bilaabaneysa isku soo uruurinta mootada korontada Guji.
Haddii aan tixgelinno in Apple ay raadineyso soosaaraheeda Apple Car, iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leeyihiin alaab-qeybiyehooda Foxconn, hubaal fikradda ah wada-shaqeynta labada inay soo saarto gaariga ugu horreeya oo leh calaamadda tufaaxa xagga hore ayaa miiska saaran ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Alaab-qeybiyeha Apple Foxconn wuxuu bilaabay inuu sameeyo gawaarida
The MacBook Air oo leh M1 chip oo ah 959 euro at Apple
Netflix ma tixgelinayso inay tijaabiso codka maqalka ah